Su'aalaha la Weydiiyo Caafimaadka Habdhaqanka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka > Su'aalaha Caafimaadka Habdhaqanka
Baro wax badan oo ku saabsan xulashooyinka daaweynta ee maskaxdaada, shucuurtaada, iyo caafimaadkaaga dhaqanka.
Baro wax ku saabsan Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee caymiska Washington (CHPW) ee loogu talagalay caafimaadka maskaxda, shucuurta, iyo dhaqanka, iyo sidoo kale xulashooyinkaaga daaweynta.
Su'aalaha guud ee ku saabsan caafimaadka habdhaqanka
Miyaan wacaa qadka dhibaatada?
Dhibaatadaadu waa ansax. Haddii aad dhibaato ku jirto, ama aad leedahay arrimo caafimaadka maskaxda ah, ama aad ku fekerayso inaad is disho, khadadka dhibaatooyinka ayaa halkan u jooga inay ku caawiyaan. Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato:
Ma jiro sharci adag oo dhakhso leh goorta la wacayo khadka gargaarka degdegga ah. Taasi waxay ka dhigan tahay uma baahnid inaad walwasho in dhibaatadaadu aysan “ku filneyn” in la waco. Cidna kuma xumaanayso inaad u yeedhay.
Waa sir. Hawlwadeenada khadka qalalaasaha ayaan cidna ula wadaagi doonin waxaad u sheegto.
Waad soo wici kartaa qof aad jeceshahay. Xitaa haddii aadan aheyn qofka dhibaatada kujira, waxaad wici kartaa qadka dhibaatada si aad caawimaad iyo talo uga hesho.
Waa kuwan xariiqyo aad wici karto:
Khadka Talo bixinta Kalkaalisada. Ku hel talo bixin caafimaad 24/7 bilaash ah: 1-866-418-2920 (TTY Relay: Garaac 711)
Nooca Ka Hortagga Ismiidaaminta Qaranka. 1-800-273-8255
Khadka Caawinta Soo-kabashada Washington.
Haddii adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ah aad dhibaato ka haysataan cilladda isticmaalka mukhaadaraadka, arrimaha caafimaadka maskaxda ama khamaarka dhibaatada fadlan tixgeli inaad wacdo Khadka Caawinta Soo-kabashada Gobolka Washington. Kani waa khad caawimaad qarsoodi ah oo qarsoodi ah kaas oo bixiya faragelinta dhibaatooyinka iyo u gudbinta shaqsiyaadka ku nool Gobolka Washington. 1-866-789-1511 (24/7) ama 206-461-3219 (TTY), ama aad http://www.warecoveryhelpline.org/mental-health/.
Dhallinyaradu waxay la xiriiri karaan dhallinyarada kale inta lagu jiro saacadaha gaarka ah: wac 1-866-833-6546 ama booqasho 866teenlink.org.
Caawinta deegaanka. Caawimaad iyo talo u dhow gurigaaga, waxaad wici kartaa qadka dhibaatada ee gobolkaaga ama degmadaada: Eeg liiskayaga khadadka caawinta dhibaatooyinka ee deegaanka.
Sideen ku heli karaa bixiyaha xanaanada caafimaadka dhimirka?
1. Tag qadka Tusaha Bixiyaha.
2. Gali nambarkaaga boostada.
3. Hoos u dhigista liiska "Nooca Bixiyaha", ka xulo "Caafimaadka Habdhaqanka."
4. Gali ereyga raadinta ee sida ugu fiican u qeexaya waxaad u maleyneyso inaad u baahan tahay berrinka oranaya "Takhasuska":
La-taliye. La taliyayaashu way kula hadlayaan waxayna kaa caawinayaan inaad abuurto xeelado wax looga qabanayo dhibaatooyinkaaga. (La-taliye hidde ah ayaa waxyar ka duwan: Waxay caawiyaan qoysaska halista ugu jira cudurrada hidda-socodka.)
Ku tiirsanaanta kiimikada Xirfadlayaasha ku tiirsanaanta kiimikada waxaa loo tababaray inay wax ka qabtaan xaaladaha isticmaalka maandooriyaha iyo balwadda.
Caafimaadka Maskaxda. Tani waxay badanaa tilmaamaysaa meesha uu diiradda saarayo bixiyeha. La-taliye ama kalkaaliye caafimaad ayaa ku takhasusi kara caafimaadka maskaxda.
Kalkaaliye caafimaad. Kalkaaliye caafimaad ayaa kuu qori kara daawo, baari kara jirrooyinka, iyo baari karaa oo daaweyn karaa bukaannada. Badanaa ma bixiyaan latalin.
Dhakhtarka Maskaxda. Dhakhtarka maskaxda ayaa bixiya daaweyn wuxuuna kuu qori karaa daawo.
Shaqaalaha Bulshada. Shaqaalaha bulshada ayaa kaa caawin kara inaad wax ka qabato arrimaha bulshada ee ka qayb qaadanaya caafimaadkaaga maskaxda. Kuwaas waxaa ka mid ah (laakiin aan ku xaddidnayn) sugnaanta cuntada, tababarka shaqada, iyo helitaanka guryo.
Waxaad sidoo kale ka raadin kartaa aagagga bixiyaha caafimaadka dabeecadda uu ku leeyahay tababaro ballaaran iyo khibrad adeegsiga aagagga baaritaanka Aagagga khibradda hoostiisa qeybta Kala-xulashada Filterka Sare
5. Marka la eego "Xulashada Filterka Sare," u isticmaal liiska "Raadinta Dhexdeeda" si aad u shaandhayso bixiyeyaasha aad kaaga fog.
Si aad uga hesho adeeg bixiye Caafimaad Dabeecad oo loogu talagalay carruurta Tusaha Bixiyaha, goobta natiijooyinka Xaddidintu waxay tilmaamaysaa "Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Carruurta" iyo sidoo kale xaddidaadaha da'da. Waxa kale oo aad ka raadin kartaa ereyga "Carruurta" aagagga Khubarada ee ku hoos yaal nooca bixiyaha Caafimaadka Habdhaqanka ama waxaad ka heli kartaa liistada tas-hiilaadka caafimaadka hab dhaqanka ee la shaqeeya dhallinyarada HALKAN.
Waxaad ka arki kartaa bixiye kasta oo caafimaadka maskaxda ee shabakadda ah qiimeyntaada hore. Intaas ka dib, waad sii wadi kartaa aragtida qofkaas, ama waxay kuu gudbin karaan adeeg bixiye kale.
Waa maxay maamulaha dacwada? Sideen kuhelaa mid?
Inta badan waxa kaa caawiya inaad ka bogsato waxay ka dhacaan banaanka xafiiska dhakhtarka. Abaabulka daryeelka iyo helitaanka taageerada nolol maalmeedkaaga ayaa noqon kara walaac ama dhib. Taasi waa sababta aan u hayno Maareeyayaasha Dacwada inay ku caawiyaan. Qaar badan oo ka mid ah Maareeyayaasha Dacwadeennu waa shaqaale bulsheed oo ruqsad haysta, kalkaaliyeyaal caafimaad, ama khabiiro.
Maareeyayaasha Kiisku waxay:
Raadi adeeg bixiye adiga ah
Hubso inaad u gasho inaad aragto dhakhtar
Kuu xiriiriyo caawimaadda maxalliga ah ee guryaha, cuntada, bixinta biilasha, iwm.
Abaabul gaadiidka ballamaha
La soco dawadaada
Kaa caawinaya inaad dejiso oo aad gaarto hadafyada caafimaadka
Maareynta Kiiska ayaa loo daboolay xubin kasta oo ka tirsan CHPW. Ka wac Adeegga Macaamiisha 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711) si aad u bilowdo.
CHPW ma iga caawin kartaa inaan ka helo taageerada beeshayda?
Haddii aad horey u ogayd inaad u baahan tahay caawimaad xagga guriyeynta, cuntada, tababarka shaqada, ama taageerada kale ee bulshada, kooxda Barnaamijyada Beesha ayaa ah joogsiga ugu horreeya ee wanaagsan. Barnaamijyada Bulshada ku xirmaan xubnaha CHPW adeegyada ku saleysan bulshada. Shaqaalaha caafimaadka bulshada ee kooxda Barnaamijyada Beesha ayaa ku takhasusay ilaha laga heli karo meesha aad ku nooshahay. Maamulaha kiisaska CHPW ayaa kuu gudbin kara shaqaalaha caafimaadka bulshada haddii labadiinuba aad go'aansataan inaad u baahan tihiin.
Weligay hore uma aan tegin la-talin. Maxaan filan karaa?
La kulanka daaweeyahaaga. Daaweeye kasta wuu ka duwan yahay. Daaweeyayaasha qaarkood waxay doorbidaan inay wax ka bartaan asalkaaga, taariikhdaada, iyo arrimahaaga caafimaad. Kuwa kale ayaa diiradda saaraya xallinta. Qaarkood intabadan waxay dhageystaan, halka kuwa kale doorbidaan isdhexgalka.
Waxaan kugula talineynaa inaad gasho casharkaaga latalinta ee ugu horeeya adoo leh fikrad cad oo ah ujeedooyinkaaga gaarka ah ee daaweynta. Isweydii:
Maxaan u tegayaa daaweyn? Ma in la xalliyo dhibaato gaar ah, mise in wax laga qabto arrin socota?
Muddo intee le'eg ayaan filayaa inaan ku daweynayo?
Maxaa aniga iigu muhiimsan?
Markaad timaado. La-taliyayaasha iyo daaweeyayaasha waxay lahaan karaan xafiis xafiis ama xafiis la wadaag bixiyeyaasha kale. Waxaad u baahnaan kartaa ama uma baahnid inaad saxeexdid. Badiyaa waxaa jiri doona qolka sugitaanka oo aad fariisan karto illaa laga gaarayo ballantaada.
(Haddii aad ku aragto daaweeye adoo adeegsanaya telemedicine, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad gasho!)
Ku dhagan Aadida teraabigu waxay la mid tahay tababarka maskaxdaada iyo shucuurtaada. Iyo sida la shaqeynta, ma sahlana: waxaad dareemi kartaa raaxo la'aan, murugo, ama xanaaq markaad ka wada hadlayso mowduucyo xanuun leh. Laakiin haddii aad ku sii hayso, waxaad arki kartaa guulo waaweyn.
Waa muhiim inaad dareento raaxo leh daweeyahaaga. Haddii aadan dareemin in daaweeyaha uu adiga kugu habboon yahay, CHPW ayaa kaa caawin kara inaad hesho daaweeye cusub.
Waxaan ka yarahay 18 jir. Miyaan arki karaa daaweeye / adeeg bixiye caafimaad maskaxeed / khabiir ku takhasusay qabatinka aniga oo aan u sheegin waalidkey ama ilaaliyeheyga?
Gobolka Washington, carruurta da'doodu u dhexeyso 13 illaa 18 uma baahna ogolaansho waalid ama ilaaliye si ay u helaan adeegyo caafimaad oo badan, oo ay ku jiraan:
Bukaan socodka bukaan socodka ah iyo daaweynta isticmaalka maandooriyaha
Daaweynta bukaan-jiifka caafimaadka maskaxda (waalidiinta waa la ogeysiin karaa)
Baaritaanka STD / HIV iyo daaweynta (14 iyo ka weyn)
Adeegyada ka hortagga uurka, adeegyada ilmo iska soo ridka, daryeelka dhalmada ka hor (ma jiro xadka da'da)
Waxbadan ka baro xuquuqdaada
Waxaan u maleynayaa in ilmahaygu niyadjabsan yahay / qabo caafimaad maskaxeed ama arrimo maandooriye ah. Maxaa samayn karaa?
Haddii cunuggaagu xubin ka yahay CHPW, caafimaadkiisa maskaxda iyo daroogada isticmaalka mukhaadaraadka waa la daboolay. Adeegga Macaamiisha ee CHPW ayaa kaa caawin kara inaad u hesho bixiye ku habboon baahida ilmahaaga iyo sidoo kale inaad ku xirto maareynta kiiska haddii ay u baahdaan.
Dhibaatooyinka caafimaadka hab dhaqanka, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira xoog sheegashada, ku xadgudubka mukhaadaraadka, iyo walwalka ama niyadjabka, u muuqan karaan kuwo ka duwan carruurta iyo dhalinyarada marka loo eego dadka waaweyn. Waa kuwan astaamaha qaarkood ee laga taxadarayo:
Hurdada oo aad u badan ama kuma filna
Socod ku wareegsi
Ka noqoshada dadka
Xoogsheegashada: “luminta” waxyaabaha aad jeceshahay, madax xanuun badan iyo calool xanuun
Xiisaha dadka ama howlaha
Dhibaatooyinka cusub ee sharciga ama dugsiga
Karti darida ah in diirada la saaro
Gariirid ama gariirid
Haddii aad ka walwalsan tahay ilmahaaga, la hadal dhakhtarkooda ama la-taliyaha dugsiga oo weydii kheyraadka bulshadaada. Haddii aad u baahan tahay caawimaad hadda, CHPW waxay bixisaa hagitaan ku saabsan daryeel helid, our 24/7 Khadka Talo-bixinta Kalkaalisada iyo Khadadka caawinta deegaanka, iyo annaga buugga macluumaadka ee bixiyeyaasha shabakadda.
Kheyraadka caafimaadka hab dhaqanka iyo siyaabaha looga qeyb qaato
Halkeen ka heli karaa wax badan oo ku saabsan arrimaha caafimaadka maskaxda?
Waxaa jira ilo badan oo loogu talagalay barashada caafimaadka maskaxda. Haddii aad raadineyso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan caafimaadka dabeecadda, soo kabashada mukhaadaraadka, caafimaadka maskaxda, iyo inbadan, waa kuwan meelaha laga bilaabayo:
CHPW waxay lashaqeysaa Healthwise si ay u bixiso mid dhameystiran Maktabada Macluumaadka Caafimaadka. Maktabada waxaa ku jira ilo Caafimaadka Maskaxda iyo Dhaqanka.
The Blog Xiriirinta CHPW waxay leedahay talooyin caafimaad iyo caafimaad oo aad u isticmaali karto nolol maalmeedkaaga, oo ay ku jiraan talooyinka la xiriira caafimaadka maskaxda.
Qof walba sheekadiisa caafimaadka maskaxda waa ka duwan tahay. Ururadan maxalliga ah, gobolka, iyo kuwa qarankaba dhammaantood waxay u wajahaan arrimaha caafimaadka maskaxda qaab iyaga u gaar ah waxayna leeyihiin meelo kala duwan oo diiradda la saarayo:
Isbahaysiga Qaranka ee Cudurka Maskaxda (NAMI) Washington
Akadeemiyada Mareykanka ee Cilmu-nafsiga Carruurta & Dhallinyarada (AACAP)
Ururka Cilmi-nafsiga Mareykanka
Xagee wax badan ka ogaan karaa cilladaha isticmaalka mukhaadaraadka iyo soo kabashada?
Waxaa jira ilo badan oo loogu talagalay barashada cilladaha isticmaalka maandooriyaha (SUD) iyo dariiqa soo kabashada. Waa kuwan meelaha laga bilaabayo:
CHPW waxay lashaqeysaa Healthwise si ay u bixiso mid dhameystiran Maktabada Macluumaadka Caafimaadka. Maktabada waxaa ka mid ah ilaha SUD iyo soo kabashada.
The Blog Xiriirinta CHPW waxay leedahay talooyin caafimaad iyo caafimaad oo aad u isticmaali karto nolol maalmeedkaaga, oo ay ku jiraan talooyinka la xiriira isticmaalka mukhaadaraadka iyo soo kabashada.
Qof walba sheekadiisa caafimaadka maskaxda waa ka duwan tahay. Ururradan maxalliga ah, gobolka, iyo kuwa qarankaba waxay bixiyaan macluumaad iyo ilo ku saabsan khalkhalka mukhaadaraadka iyo soo kabashada:
Ku Xadgudubka Maandooriyaha iyo Maamulka Adeegyada Caafimaadka Maskaxda (SAMSA)
Noloshaydu runti way walaac badan tahay hadda. Taasi miyay sabab u tahay in la helo daaweyn caafimaad dabeecadeed?
Xaqiiqdii. Dhacdooyinka nolosha waxay qaadan karaan waqtigaaga iyo dhaqaalahaaga, waxay sababi karaan xanuun shucuur ah, waxayna ku kordhin karaan walaac. Kuwaas oo dhan waxay saameyn ku yeelan karaan caafimaadkaaga maskaxda iyo shucuurtaada. Waxay bixisaa CHPW adeegyada caafimaadka hab dhaqanka kaa caawin kara, oo ay ka mid yihiin maaraynta kiiska. Wax badan ka baro isbeddelada nolosha iyo sida loo maareeyo:
CHPW waxay lashaqeysaa Healthwise si ay u bixiso mid dhameystiran Maktabada Macluumaadka Caafimaadka. Maktabada waxaa ka mid ah ilaha nolosha iyo dhacdooyinka qoyska.
The Blog Xiriirinta CHPW waxay leedahay talooyin caafimaad iyo caafimaad oo aad ku isticmaali karto nolol maalmeedkaaga.
Qof walba sheekadiisa caafimaadka maskaxda waa ka duwan tahay. Kheyraadkaani waxay bixiyaan macluumaad iyo talooyin ku saabsan la qabsiga isbedelka iyo diiqadda:
Shabakada Kajawaabida Dhibaatada
Psychiatric Association American
Halkeen ka heli karaa wax badan oo ku saabsan xirfadaha nolol maalmeedka caafimaad qaba?
Waxaa jira ilo badan oo loogu talagalay barashada xirfadaha nolol maalmeedka caafimaad qaba. Waa kuwan meelaha laga bilaabayo:
CHPW waxay lashaqeysaa Healthwise si ay u bixiso mid dhameystiran Maktabada Macluumaadka Caafimaadka. Eeg qaybta Fayo-qabka iyo Ka-hortagga ee bogga si aad u hesho ilo iyo qalab aad ugu isticmaasho nolol maalmeedkaaga. Waxaad sidoo kale tixraaci kartaa Xarunta Kheyraadka Coronavirus loogu talagalay faahfaahinta bilaashka ah, maqaallada, iyo fiidiyowyada astaamaha, ka-hortagga, iyo daaweynta COVID-19.
The Blog Xiriirinta CHPW leeyahay tiro ka mid ah talooyinka caafimaadka iyo caafimaadka waxaad u isticmaali kartaa nolol maalmeedkaaga.
Waxaan rabaa inaan ka caawiyo bulshadeyda inay wax ka qabato arrimaha caafimaadka maskaxda iyo dhaqanka. Sideen uga qayb qaadan karaa?
Waxaa jira siyaabo fara badan oo looga qayb qaato sida bulshadaadu wax uga qabato caqabadaha caafimaadka maskaxda. Waa kuwan qaar ka mid ah.
Samee talooyin ku saabsan sharciyada cusub.
Haddii adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ahi ay heleen daaweyn caafimaad hab dhaqan, waayo-aragnimadiinna nololeed waa mid qiimo leh. Ururradan waxay la shaqeeyaan dad adiga oo kale ah si ay ugu doodaan sharciyada si loo hagaajiyo sida aan u siino daryeelka caafimaadka hab dhaqanka:
Shaxda Wadaagga Nidaamka Dhallinyarada Qoyska ee Gobolka Washington (FYSPRT)
Ku soo biir guddiga latalinta bulshada, golaha, ama guddiga.
Guddiyada la talinta bulshada, golayaasha, iyo guddiyada waa kooxo ka kooban qeyb bulshada ka mid ah, iyo qeyb ka mid ah xubnaha hay'ad (sida sharci dajiyayaasha, dhakhaatiirta, ama saynisyahannada) Waxay la wadaagaan macluumaadka gadaal iyo gadaalba si ay bulshada uga caawiyaan go'aanada.
Gobolka Koonfur-galbeed (gobollada Clark, Klickitat iyo Skamania):
Shaxda Wareega Nidaamka Iskaashatada Dhallinyarada Qoyska ee Koonfur-Galbeed
NAMI Koonfur Galbeed Washington
Gobolka King (King County):
Golaha Dhalinyarada Qoyska ee Degmada King
NAMI Degmada Koonfurta King
Gobolka Spokane (Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, iyo Stevens)
Jadwalka Wareegga Wada-hawlgalayaasha Nidaamka Dhallinyarada Qoyska ee Waqooyi-bari
North Sound Region (Snohomish, Skagit, Whatcom, San Juan, iyo Island Island):
North Sound Youth iyo Isbahaysiga Qoyska
Gobolka Greater Columbia (Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas, Walla Walla, Whitman, iyo Yakima countiyada):
Caafimaadka Habdhaqanka Weyn ee Columbia
Jadwalka Wareega Wadajirka Nidaamka Dhalinyarada Qoyska ee Greater Columbia
Bulsho Weyn oo La Xisaabtami karo ee Caafimaadka
Isbahaysiga Soo-kabashada Benton Franklin
Daryeelka Benton Sii - Daryeelka Guriyeynta
Barnaamijka Kahortagga Xiriirinta Muhiimka ah
Wakaaladda Rajada, SPARK Peer Support Group
Iskaa wax u qabso ugu shaqee bulshadaada.
At CHPW, waxaan aaminsanahay in qofna kaligiis aheyn. Tabaruciddu waa hab fiican oo loogu isticmaalo khibradaada aad ku nooshahay inaad ku taageerto dadka kale.
Gobolka Koonfur-galbeed (gobollada Clark, Klickitat, iyo Skamania):
Barnaamijka La-talinta Fasalka Sare ee Degmada Snohomish
Saddexda Magaalo ee NAMI
Su'aalo badan oo la iska waydiiyo xubnaheenna ayaa laga heli karaa hoos:
Eeg Xubnaha Su'aalaha La Weydiiyo
Eeg guud ahaan Apple Health FAQs